China TMD-301 Inotakurika Eddy-yazvino Detector Mugadziri uye Mutengesi | TMTeck
TMD-301 Inotakurika Eddy-yazvino Detector
TMD-301 inogadzirwa nemagetsi emagetsi eiyo gauge gauge, iyo inogona kuyera ukobvu hwesimbi kana yemagineti isina coupling mumiririri kana neisina-maitiro modhi, yakasundirwa kunze kwazvino neTMTeck Instrument Co, Ltd.
TMD-301 inotakurika eddy-yazvino detector ndeye eddy-yazvino yekuona chishandiso / zvishandiso nekutora eddy-yazvino, zvemagetsi zvemagetsi uye michina yemakomputa. Ichi chishandiso chinogadzirwa pamwe nebasa rekuratidzira eddy-yazvino impedance ichnography. Kuonekwa kwaro kwakawanda kubva pa50Hz-10MHz, izvo zvinoita kuti zvikwanise kuzadzisa zvinodiwa zvekuona simbi dzakasiyana siyana. Iyo yakanaka mukuita uye yakaderera inodya musimba, nemaawa matanhatu ehupenyu hwebhatiri mune isingamise sevhisi.
● TMD-301 inogadzirwa kuti ishandiswe mukukanganisa kuona, ukobvu hwekuyera uye kuyedza magetsi, pamwe nekushandira kweiyo nyowani yedhijitari eddy-yazvino yekugadzirisa nzira.
● Easy oparesheni pani uye nechinangwa-chinangwa pfundo.
● TMD-301 inokodzera kuongororwa pane zvakasiyana simbi uye zvidimbu zveindasitiri. Kukanganisa senge kutsemuka pane welds, zvakapetwa, mavanga, mapako, kutsemuka, kukwenya, uye kupinduka kunopatsanura kana kupatsanura pane pombi yemhangura, isina musono yekuba pombi uye isina chinhu yekuba pombi zvese zvinogona kuonekwa nekunzwa kwakanyanya.
● Kuwedzera mabasa akadai sekukora ukobvu gauging uye magetsi kujekesa kuongorora kunowanikwa kuti zviitwe.
Voltage Dhiraivha 8 mazinga anogadziriswa
Chinyorwa Phase Shift Range 359 °（nhanho 1 °）
Kuwana 0～80dB（nhanho 0.5dB）
Sampling Frequency 40MHz, 12-bit data kutora
Sefa yeWave Dhijitari Sefa
Zvinotyisa Phase Alarming (Yakatsanangurwa Inowanikwa Inotyisa Nzvimbo: A, B, C)
Rongai mhando Kufungisisa, Kusiyanisa, uye Mhedziso
Ratidza Maitiro Impedance ichnography / Nguva-base
Balance Mode Dhijitari
Ratidza 5.7 '640 × 480 yakajeka TFT skrini, yakanaka kuratidza kune yakazara
Kuchengetedza Zvemifananidzo kana zvigadziriso uye dzokorora
Kutaurirana USB comm port (yakakodzera PC)
In-set Magetsi magetsi yakakura bhatiri rinokwana mukushandira kwemaawa matanhatu pasina kuchekwa
Kunze Kwesimba magetsi DC 12V, DC 12V (kuburikidza nemagetsi adapteri)
Pashure: Dhijitari Ferrite Meter TMF110
Zvadaro: Eddy Iyezvino Magetsi Conductivity Meter TMD-102
TMTECK TC-200 Crack detector yeKutsvaga crac ...
Pipe Calibration Zvidhinha, Ultrasonic Calibration Block, Calibration Mabhokisi, Kuchengetedza Bvunzo Bvunzo, Ut Test Bvunzo, Ultrasonic Transducer Tambo,